We She Me: သားလေး ဖွားစဉ်က (၅)
မဇနိ - 6/9/08, 1:35 AM
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြည့်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ စိတ်ရှည်ရှည်ရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ချစ်စရာ သားလေး၊သမီးလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ WeSheMe မိသားစုလေးဖြစ်ပါစေလို့။
စစ်ကိုင်းသူ - 6/9/08, 4:41 AM
ကိုအန်ဒီရေ မွေးမွေးချင်း ကလေးကို နို့ဦးရည်တိုက်ရပါတယ်။ မြန်မာမှာဆို အမေထက် ကလေးက အရင် ခွဲခန်းအပြင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ အမေက ချုပ်ရလုပ်ရတာတွေကျန်သေးတာကိုး။ တချို့ဆို အဲလို မထုတ်ခင်ကို ကလေးကို နို့တိုက်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါက ကလေးအတွက် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ရောဂါကာကွယ်တဲ့ ဓာတ်တွေလဲ ပါ ပါတယ်။ အရည်ကြည်ပဲ ထွက်သေးတာပါ။ အဲဒါကို တိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မိခင်နဲ့ ကလေး အတူတူထားတာ ပိုသဘောကျတယ်။ အမှန်က အဲဒီအရွယ်မှာ အချိန်နဲ့နို့တိုက်တာထက် ဆာတိုင်းတိုက်ရတာပါ။ မိခင်အနားမှာထားတဲ့အတွက် ပိုပြီးလဲ နွေးထွေးလုံခြုံမှု့ကိုရော မိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရော ခံစားရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးမှာတော့ အကောင်းရော အဆိုးရော ရှိတာပေါ့လေ။ မိခင်နဲ့ထားတော့ စောစောကပြောသလို ကောင်းတာတွေရှိပေမဲ့ ဧည့်သည်လာတဲ့အခါမှာလဲ ကလေးက ဒီအခန်းထဲမှာပဲ ရှိနေတာဆိုတော့ ချီကြ ပြုကြနဲ့က ကလေးပေါက်စအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ဒီအရွယ်လေးက အရမ်းနုသေးတာကိုး။ သမီးလေးကလဲ မောင်လေးကို အရမ်းသဘောကျနေမယ်ထင်တယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးကို အားကျတယ်ဗျာ။
nu-san - 6/9/08, 1:58 PM
Andy ရေ..သူတို့လေးတွေ မွေးဖွားစဉ်က အကြောင်းရေးထားတာ တကယ်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ အမ ရှေ့မှာထဲက comment ရေးချင်ပေးမယ့် စာဖတ်ရတာ ပြတ် ပြတ်သွားတော့ အားလုံးပြီးမှ ရေးမယ်ဆိုပြီး စောင့်နေတာ.. ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးလည်း ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ မိသားစု လေးယောက်ရိုက်ထားတာလေးကို သဘောကျတယ်။ အဖိုးအဖွားနဲ့မြေးပုံလေးရောပဲ။ ပျော်စရာကြီး.. :)။ မောင်လေးရော အဖိုးအဖွားရောဆိုတော့ မြတ်နိုးလေး ပျော်နေတယ်နော်။
Andy တို့ကံကောင်းတယ်လို့ အမတောင် သူ့ကို ပြောနေသေးတယ်။ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်ဆို အားလုံး ပြည့်စုံသွားပြီလို့... :D သားလေး နာမည်ရော ပေးပြီးသွားပြီလား။ ကလေး ကင်ပွန်းတပ် လုပ်ဦးနော်။ ကလေးတို့မေမေရေ..ဒီတခါ ပန်းအဖြူပန်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်.. :D
ဝေတိုး - 6/10/08, 5:29 AM
one year from now on, another one? :D
Aung Myo Htet - 6/10/08, 8:57 PM
မြန်မာစာမှာသင်ခဲ့ရတဲ့ ရသကြီး ဆယ်ပါးလုံး မြောက်ပါပေတယ်။ ကောင်းလေစွ ကိုအန်ဒီ။
Andy Myint - 6/11/08, 3:14 PM
စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်ဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဇနိ။ မဇနိတို့ မောင်နှံကလည်း ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်နော်။
ဟုတ်တယ် မစစ်ကိုင်းသူရေ။ မသိတာနဲ့ (နို့မထွက်သေး မတင်းသေးတာနဲ့) တိုက်ရကောင်းမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတာလေ။ ဒါတောင် ဒုတိယ ကလေး။ အင်း.. မိခင်နဲ့ ကလေး အတူတူ ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့အမေ မအိပ်ရမှာ စိုးလို့။ ကလေးကိုပဲ အာရုံရောက်နေပြီး စိတ်ပူပြီး မအိပ်မှာ စိုးလို့။
သိတယ် မနုစံရေ.. အေးဆေးပေါ့။ ဟုတ်ပ အရင်တုန်းက ပန်းအဖြူ ပန်ထားတဲ့ အရှိန်က အခုမှ လာပြီး အစွမ်းပြလား မသိပါဘူး။ အခုနေများ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတုန်း ပန်မိရင် အမြွှာတွေ ဘာတွေတောင် ဖြစ်နေဦးမယ်။ တော်သေးတယ် မပန်မိလို့။ အစ်မ အီးမေးတွေ ဘာတွေ ပို့ပြီး mms နဲ့ ပြောစရာ ရှိလည်း ပြောပေါ့။
မနောက်ပါနဲ့ မဝေတိုးရယ်။ ဟားဟား။ သန်းထီတွေ ဘာတွေ ပေါက်ပြီး သူမလည်း ကျန်းမာသေးရင်တော့လည်း မွေးရတာပေါ့။ အခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ..
ကျေးဇူးပဲ အောင်မျိုးထက်။ ဒါနဲ့ ကိုးပါးလားလို့ “နော”အရသာလို့တော့ မှတ်မိတယ်။ အချင်းချင်းတွေ တစ်ပါး ပိုပေးတယ်ပေါ့။ (သေချာတော့ မမှတ်မိပါဘူး)
Anonymous - 6/12/08, 8:05 PM
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မိသားစု ပုံလေးတွေ တွေ့ရတာလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။ အမကလည်း ကလေးမွေးပြီးစလို့ မထင်ရလောက်အောင်ကို နုပျိုလန်းဆန်းနေကြောင်း ပြောပေးပါနော်။
ကျွန်မသိချင်တာလေးတခုကို အချိန်ရရင် ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ အမ က ကလေးမွေးပြီးတာနဲ့ ဗိုက်ပူတာက ချက်ချင်း ပြန်ကျသွားတယ်နော်။ နဂိုလိုပဲ။ ဘာမှ သိပ်မသိသာတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမိတ်ဆွေ ကတော့ မွေးပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပြန်မကျလာပါဘူး။ ဗိုက်က ပူလျက်ကျန်ခဲ့နေလို့။ သူလည်းစိတ်ညစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုအန်ဒီတို့ အတွေ့အကြုံလေး ဝေမျှပေးပါလားရှင်.
Andy Myint - 6/12/08, 11:12 PM
ကျေးဇူးပါပဲ.. အရင်ဆုံး မုန့်လိုက်ကျွေးမယ်။ အခုလို မြောက်ပေးတဲ့ အတွက်။ သူမက ဆေးရုံ မဆင်းခင်ကတည်က ဗိုက်မှာ ပတ်လို့ ရတဲ့ ရှုံ့ခါးပတ်ပြားကြီး ပတ်ထားပါတယ်။ သမီးလေး မွေးကတည်းက ၀ယ်ထားတာလေ။ မွေးပြီး ၄-၅ ရက်နေတော့ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းတာနဲ့ သွေးလည်း မထွက်တော့တာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း နည်းနည်း လုပ်ပါတယ်။ ပက်လက် အိပ်နေပြီး ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို မ ထားတယ်။ မ ထားတဲ့ အချိန်မှာ ၁ ကနေ ၆ အထိ ရေနေတယ်။ ပြီးတော့ ၁ ကနေ ၄ အထိ ရေပြီး ခြေထောက်တွေကို ပြန်ချတယ်။ ပထမတော့ တစ်ချောင်းစီ အရင် လုပ်တာပါ။ နောက်မှ ၂ ချောင်းလုံး ပူးပြီး လုပ်တာ။ ပြီးတော့ အိပ်ထမတင် လုပ်တယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြစ်ညှစ်ပြီးတော့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ဖြည်းဖြည်းပဲ နိုင်သလောက် လုပ်တာပါ။ ထ နိုင်သလောက်ပဲ ထတာပါ။ နို့တိုက်နေလို့ အစားကတော့ စားတယ်။ မရှောင်ဘူး။
Anonymous - 6/13/08, 7:22 PM
ပြန်ဖြေပေးတဲ့အတွက် သိပ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မ မိတ်ဆွေက မွေးပြီးတာ ခြောက်လလောက်ရှိတဲ့အထိ ဗိုက်က မကျဘူးဖြစ်နေတာ။ အခု ကိုအန်ဒီပြောပြတာလေးတွေ ပြန်မျှလိုက်မယ်နော်။
maung - 7/18/08, 3:42 PM
very good writing and interesting...
cervical tear occured because the nurse didn't do episiotomy...